वर्णन मिडिया राजतंन्त्र कसैले टपक्क टिपेर ल्याउने होइन आउने हो - वर्णन मिडिया
राजतंन्त्र कसैले टपक्क टिपेर ल्याउने होइन आउने हो
२६-साउन-२०७६ | ०५:०७:३३ pm
अहिले रोपाँई सकेर खाली भएको जनदिमागमा २ वटा कुराको बहस चर्किएको छ । एउटा पक्षले भन्छ राजतन्त्र आउँछ, आज भोली नै आउँदछ । अर्कोले भन्छ होइन यो बगेको खोलाको पानी हो यो फर्केर आउन सक्दैन । कसैले त राजतन्त्र भनेको बोक्रा छोडाएको अण्डा हो यो बोक्रा छोडाएको धेरै समय भै सक्यो त्यसैले यो कुहेर गै सक्यो यसलाई खोजेर अर्थ छैन ।
यि बजारमा चलेका तर्क अथवा कुतर्कका पोकाहरु हुन् । राजतन्त्र आउने र नआउने दुवै सत्य तर्क हुन् । किनकी यो आउन पनि सक्छ, यो नआउन पनि सक्छ । शक्तामा पुग्ने भन्ने कुरा बडो अनुमान गर्न नसकिने विषय हो । यो देशका पहिलो राष्ट्रपति रामबरण यादव जुन दिन यो देशको राष्ट्रपति बने । त्यो दिन भन्दा ४ दिन अगाडी उनलाई राष्ट्रपति बन्छु भन्ने थाहा थिए । यतिसम्मकी उनलाई राष्ट्रपति बनाउन किंमेकरको धूमिका खेल्ने गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई समेत यो कुराको जनकारिसम्म थिएन ।
जीवनको कुनै कन्दरामा बर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बन्छु भन्ने थिएन । समयको चक्रले पनि उनलाई राष्ट्रपति बनायो । राजतन्त्र फरकतन्त्र हो यसमा राष्ट्रपति फेरिए जस्तो सहजता नहोला तर माहौल बन्दै गएमा राजतन्त्र पनि आउनसक्छ । नआउन पनि सक्छ ।
राजनीति संभाव्यताको खेल हो । यसमा कुनतंन्त्र कतिबेला आउँदछ ? कुन कतिबेला जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन । गणतन्त्र पनि कसैको अनुमानले आएको होइन । समग्र देशभरको माहौल त्यस्तै बन्यो गणतन्त्र आयो । गणतन्त्रले पनि जनतालाई भने जस्तो सहजता, सौहाद्रता, सौम्यता आर्थीक सम्पन्नता दिनसकेन, यहि कारणले गर्दा जनताको बीचमा राजतन्त्र फर्किने चर्चा चर्किएको छ । टिभिमा हुने गर्ने बहसमा पनि यो कुरा सुनिन्छ । राजतंन्त्र आउन सक्ने २ संभावना यस प्रकार छन् ।
यो बजारिया हल्लाले राजतन्त्र आउने भन्ने कुरामा कतैपनि सत्यता देखिदैन किनकी नेपालका जनताले राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेर बर्तमान शत्ता संरचनाले त्यो विरोधलाई दमन गर्न नसकेको अवस्थामामात्र राजतन्त्र आउन सक्छ । बेलायत , नेदरलेण्ड जस्ता देशमा एक पटक हटेको राजतन्त्र पुनस्थापित गरेको उदाहरण पनि छ । त्यसैले नेपालमा पनि जनता सडकमा आए भने अहिलेको संविधान पुरै च्यातेर अर्को संविधान लेखिन्छ जसमा राजतन्त्रलाई स्पेस दिइएमा राजतंन्त्र आउन सक्छ ।
तर किन जनताले आन्दोलन गर्ला ? राजतन्त्र बाट जनताले प्राप्त गर्न सक्ने र गणतन्त्रबाट प्राप्त हुन नसकेका कुराहरुमात्र जनदवाका विषय हुन्छन् । राजतन्त्र सामन्तवाद नै हो । यससंगपनि वैज्ञानिक शासन प्रणालीको कुनै आधार छैन । विकास गर्न सक्ने, देशमा खुशियाली ल्याउन सक्ने अवस्था राजतंन्त्रसंग पनि नभएपछि किन जनता सडकमा आउला यो पनि विचारणीय प्रश्न हुन्छ ।
राजतन्त्रका लागि निम्न दुई कारणले जनआन्दोलन हुन सक्छ ।
१ यसको कारणले देश हिन्दु अधिराज्य वन्ला भन्ने आशा ।
२. ज्यादै महंगो बन्दै गएको प्रदेश सरकार हटेर केन्द्र र स्थानीयतहमात्र रहला भन्ने आशा ।
यो दुवै समस्या नेपालबाट सृजित समस्या होइनन् आयातित समस्या हुन् । नेपालमा संघियता पनि नेपालीलेमात्र चाहेर आएको होइन र धर्मनीरपेक्षता पनि नेपाली जनतालेमात्र चाहेर आएको होइन तसर्थ जनताले आन्दोलन गरेकै अवस्थामा पनि त्यसलाई रोक्न विभिन्न वैदेशिका निकायबाट दबाउने प्रयास हुनेछ । अर्थात यो तरिकाले राजतन्त्र आउने संभावना निकै थोरै छ ।
नेपाल सरकार तथा संसदले आपसी छलफल गरेर भद्र सहमतिको आधारमा राजालाई कुनै न कुनै स्पेशमा ल्याउने अवस्थामा पनि रक्तहीन क्रान्तिको आधारमा राजतन्त्र आउन सक्छ । त्यसको पनि संभावना निकै कम छ । किनकी राष्ट्रपति पनि आफै भित्रबाट घुमीफिरी बन्न पाइने भएकोले यो परामर्श नीतिपनि राजतन्त्र पर्किने बलियो आधार होइन ।
देश विखण्डनका गतिविधी सरकारले थेग्न नसकेमा
यदि देशमा कुनै कारण चरमा आन्दोलन वा शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न गयो र त्यो गतिविधी सरकारले रोक्न नसकेमा शत्ता सेनाले लिनु पर्ने अवस्था आएमा सेनाले राजतंन्त्र ल्याउने गरी काम गरेमा राजतंन्त्र फिर्ता हुन सक्दछन् । यो तरिका राजतन्त्र पुनर्उदयको सवैभन्दा सहज बाटो हो । यि र यस्तै अप्रत्यासित घटना घटेमा राजतन्त्र आउन पनि सक्छ । तर त्यति सहजपनि छैन र आवश्यकतामा बहस हुन सक्छ । यदि सेनाले चाहेमा केही हुने संभावना सधै बाँकी रहन्छ । राजतन्त्र फर्किने वा नफर्किने बहस सरकारका कामबाट निर्धारण हुन्छ । सरकारको काम ज्यादै लोकप्रिय र देशभक्त रहेसम्म राजतंत्रको हल्ला कसैले निकाल्न सक्दिैन । अन्यथा ………………. ।